Ethiopia oo Daahfurtay Kayd Dahab oo Dhan 568,000Kg – Rasaasa News
Ethiopia oo Daahfurtay Kayd Dahab oo Dhan 568,000Kg
Jan 4, 2012 000Kg, Ethiopia oo Daahfurtay Kayd Dahab oo Dhan 568
AddisAbaba, January 04, 2012 [ras] – Wakaalada macdanta Qaranka Ethiopia, ayaa todobaadkii hore sheegtay in ay daahfurtay kayd hanti dahab miisaankiisu yahay 568,000kg in laga helay degaanka Oromada iyo Tigray.
Labadan degaan ayaa la sheegay in uu ku jiro kaydka dababka ugu badan dalka Ethiopia, sida ay sheegtay waaxda baadhista dhulka ee wasaarada Macadanta Ethiopia.
Marka ay bilaabato shaqada soo saarida macadanta qaaliga ee laga helay Dawa, ee Oromada iyo Werri-da Tigray, waxaa dib u habayn lagu samayn shirkada macdanta qaranka, Ethiopia-na waxay noqon doonta dalka ugu soo saarid badan dahabka. Marka la isu geeyo kaydka dahabka ee labada meelood oo ah 600,000kg.
Dawladu waxay ka heli doontaa shirkada dakhli canshuur oo dhan $17.6, inta lagu jiro canshuur dhaafka labada meelood mudo 29 sano ah, sida laga soo xigtay Venmyn oo ah madax shirkada Koonfur Afrikan ah oo baadhid muuqaal ah ku samaysay kaydka Dahabka.
Sida la sheegay shirkadu waxay ku bilaabaysaa wax soo saarkeeda ugu horeeya 80,706 Kg oo dahab ah, oo ka imanaya goobta Dawa,laguna qiyaasay in uu ka koobnaan doono qiime dahan kayda oo ah 550,000kg mudo 20 sano ah.
Shirkadu waxay bilaabi waxa soo saarka Dawa saddex sano gudahood iyada oo la filayo in laga heli doono dakhli ah $4 bilyan mudo 20 sano ah iyo $84.8 milyan oo laga heli doono dahabka iyo macdanta Werri, sida ay sheegtay wakaalada macdanta qaranka Ethiopia.